Madaxweynaha Somaliya oo la kulmey odey dhaqameedka Puntland iy safarkiisa Qardho: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxweynaha Somaliya oo la kulmey odey dhaqameedka Puntland iy safarkiisa Qardho: SAWIRO
Madaxweynaha Somaliya ayaa la kulmey odey dhaqameedka Puntland. Kulankan oo lagu qabtay Xarunta Dhaqanka ee Hiddo Raac ee magaalada Garoowe ayaa waxaa casuumaadiisa fidiyay odey dhaqameedyo ay hormuud u yihiin Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo Suldaan Siciid Maxamed Garaase.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaaliya mudane Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyay duubabka dhaqanka kaalinta muuqata ee ay ku leeyihiin nabadeynta iyo isu soo dhaweynta shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa maanta si wadajira u dhagax dhigey wadada isku xirta Dangorayo iyo Eyl oo ay dhisi doonaan shacabka iyo maamulka Puntland.
Madaxweynaha ayaa gaaray Qardho kadib safar dhulka ah asagoo maray wadada isku xirta Garoowe iyo Qardho. Wuxuuna noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee ku safra wadada tagana magaalo ka baxsan kuwa madaarada.
Sawirka hoose madaxweyne Farmaajo uu u socda Qardho